Notsapainay ny Dealextreme Camera Connection Kit | Vaovao IPhone
Notsapainay ny Dealextreme Camera Connection Kit
Ny Camera Connection Kit dia fitaovana izay azontsika ampiasaina amin'ny fotoana tsy fahita firy fa tena mahaliana tokoa ny manana ireo dia fohy na mankafy sary fialantsasatra alohan'ny hahatongavanao ao an-trano.
Ny iray amidin'i Apple dia tsara fa mazava loatra fa lafo loatra raha tsy hampiasaintsika izy io, ka nanapa-kevitra ny hisafidy ilay amidy ao amin'ny Dealextreme aho ary ny marina dia tsy mety ho tsara kokoa ny valiny.
Nisafidy ny Kit Connection Camera 6-in-1 aho izay misy seranan-tsambo USB sy slots hamakiana karatra fahatsiarovana SD, TF, MS, M2 ary MMC. Raha hivadika eo amin'ny seranan-tsambo USB na ny mpamaky karatra dia manana switch kely eo an-kavanan'ny Kit Connection Camera isika.
Ny fitsapana voalohany dia tena nahomby. Nampifandraisiko ny SD an'ny compact ary ny faharoa ny fampiharana sary tafiditra ao amin'ny iOS dia nitsambikina hanafatra ireo sary sy horonan-tsary. Izaho koa dia nampifandray ny iPhone tamin'ny seranan-tsambo USB ary mitovy ny zava-nitranga.
Araka ny hitako ao amin'ny boky torolàlana, ity peripheral ity dia ahafahanao mampifandray fitaovana fampidirana hafa toy ny kitendry, na dia tsy afaka nanandrana ity safidy ity aza aho.
Ny hany lesoka hatreto dia, indraindray dia misy hafatra mipoitra milaza fa ity fitaovana ity dia tsy mifanaraka amin'ny iPad fa tsy misy fiatraikany amin'ny asany mihitsy.
Maherin'ny 11 Euros fotsiny ny rehetra (7 ny vidiko satria nanararaotra ny Black Friday aho). Mampalahelo fa lany ny stock amin'izao fotoana izao na dia azonao atao aza ny mametraka ny kaontinao ary mandefa izany aminao rehefa voarain'izy ireo indray.
Azonao atao ny mividy ny Dealextreme Camera Connection Kit amin'ny fipihana ity manaraka ity rohy.
Fanazavana fanampiny - iStabilizer Flex, tripod miovaova ho an'ny iPhone
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iPad » Notsapainay ny Dealextreme Camera Connection Kit
hanova dia hoy izy:
Misaotra Nacho tamin'ity Paositra ity, ny marina dia tao aoriako nandritra ny fotoana ela io fitaovana io ho an'ny Ipad 2 nataoko, misy ny fanontaniana… izay Ipad no nanaovanao ilay fitsapana ??? ao amin'ny 1 sa 2 ??? Jereo raha afaka mametaka pendrive 16Gb ao amin'ny port USB ianao ary amin'ny alàlan'ny Ifile dia afaka miditra ... (Tsy niaraka tamin'ny kitapo fampifandraisana fakan-tsary aho satria tsy azoko natao izany). Jereo ihany koa raha afaka mampifandray kapila mafy ianao. efa mandeha amin'ny herinaratra ary afaka miditra ao amin'ny Ifile… miarahaba anao.
Mamaly ny Reverse
IPad 2 izy io (jereo ny sary mivoaka miaraka amin'ny boaty fotsy). Tsy afaka nanandrana ny iFile aho satria tsy nahazo jailbreak hatramin'ny namerenan'izy ireo ny takelaka niaraka tamin'ny iOS 5 efa napetraka avy amin'ny SAT.
Ny USB 8GB izay nampifandraisiko marimarina satria notapenan'izy ireo ny herin'ny vokatra ary tsy manome mA ampy izany. Ny kapila mafy mandeha 1TB dia nitondra ahy tsy nisy olana fa tsy afaka manao ny fitsapana lazainao amiko amin'ny iFile satria araka ny nolazaiko anao dia tsy manana jailbreak aho.
Raha toa ka mivoaka amin'ny iPad 5.0.1 ny iOS 2, dia hiverina amin'ity teboka ity aho ary hanao fitsapana bebe kokoa. Miarahaba anao!
Tsara ny tolakandro Nacho
Nividy modely 5 aho ary tsy afaka nanamboatra azy io tamin'ny Ipad 2. Napetrako tao ilay karatra ary tsy mahafantatra sary izy, mila apetraka ao anaty folder manokana ve aho? etsy ankilany, ampifandraisiko amin'ny fahitalavitra izany ary tsy fantany koa aho.
Valiny ho an'i Iñigo
Eny, tsy fantatro ny marina ... miasa ho ahy tsy misy olana izany. Raha vantany vao ampidiro ny karatra fitadidiana, ny fampiharana sary tafiditra ao amin'ny iOS dia mandefa ho azy ary manome anao ny mety hanafarana na hamafana ireo sary. Tsy mila manao na inona na inona ianao, fa mandeha ho azy izany.
Manana iPad hafa hanandramanao ve ianao? Angamba tapaka ny kitanao fampifandraisana fakantsary.
Corsadi dia hoy izy:
Afaka milalao sarimihetsika ve aho sa mitovy amin'izany? Izany hoe, mamela anao hitantana sy hahita amin'ny programa ve izay ao amin'ny USB na sd hahafahanao milalao na mandingana fotsiny ny fampidinana sary sy horonan-tsary?
Valiny tamin'i Corsadi
Amin'ny alàlan'ny jailbreak dia azo atao ny mampiasa ny kit ny fifandraisana fakan-tsary hijerena ireo rakitra ary hilalaovana mivantana ireo rakitra avy amin'ireo rindranasa hafa. Satria tsy manana jailbreak amin'ny iPad 2 aho dia tsy afaka manao fitsapana fa efa fantatra fa azo atao izany. fiarahabana
Sico_pata dia hoy izy:
Mampiasa 2 × 1 hafa aho fa mitovy ihany
Manana Jailbreak aho ary afaka mampiasa azy io hilalaovana horonantsary sy feo ary koa handinihana ireo antontan-taratasy noho ny iFile sy XBMC (io irery no mahatratra USB / SD mifandray amin'ny mpampitohy)
Marina fa indraindray dia mifandray ratsy izy io satria misintona kely izy ary mila mitandrina ianao
Tsikaritro izay lazainao momba ny USB izay tsy mitaky herinaratra, na ny tsatoka fahatsiarovana sasany izay misy LED aza tsy manaiky azy
Nitranga tamiko in-droa ihany koa fa ny data rehetra avy amin'ny USB dia napetraka. Tamin'ny tranga voalohany dia Meizu MP3 izany. Tsy maintsy namerina azy aho satria very ny firmware
Ny andro hafa koa miaraka amin'ny USB 4Gb ara-barotra nomen'izy ireo ahy. Tsy afaka namerina azy io aho na dia nanao format ambany aza. Ny programa sasany dia manaiky azy io ho Bad Disk
Amin'ireo tranga roa ireo dia zavatra mitovy no nitranga tamiko. Nosokafako ny iFile, hitany ilay kapila, nilalao sy nizaha ny rakitra aho mba hitsapana azy, ary nesoriko indray (tamin'ny fomba ratsy izay eny) ary voaolana ilay zavatra
Miaraka amin'ny USB hafa dia tsy nitranga tamiko izany. Heveriko fa ny safidy tsara indrindra dia ny fampiasana karatra 16GB ohatra, ialanao fa mampihetsi-po ny mpampifandray ny lanja ary very ny fifandraisana
Fantatrao ve misy rindranasa manaiky ny USB amin'ny fomba natiora?
Mamaly an'i Sico_pata
juancagr dia hoy izy:
Salama, jereo ity iray izay avy amin'ny dealxtreme ihany koa, heveriko fa mitovy ihany, ary mivoaka amin'ny $ 7 eo ho eo, eo amin'ny 5,50 euro ………. Fiarahabana sy Krismasy sambatra.
Mamaly an'i juancagr
 M  dia hoy izy:
Mitovy daholo izy rehetra, mila mitandrina fotsiny ianao ary mijery milamina fa ny vokatra mitovy dia kely kokoa no azo. Atsinanana: http://www.dealextreme.com/p/camera-connection-kit-card-reader-with-extension-cable-for-ipad-ipod-iphone-black-108291 Fivarotana U4S7,80
Valio ny  M 
esme dia hoy izy:
Raha mampifandray pendrive ianao dia afaka mamelona azy io? Manana ny kit ny fifandraisana fakan-tsary voalohany aho ary tsy afaka.
Mamaly an'i esme
Tsy afaka ianao, efa imbetsaka izahay no nilaza an'io fiarahabana
Jordi1323 dia hoy izy:
Manana ipad 1 aho, ary tiako ho fantatra raha azo ampifandraisina amin'ity fitaovana ity ny fakantsary, hahafahana maka sary amin'ny fakantsary, fa jereo eo amin'ny ipad.
Fantatrao ve raha azo atao izany sa misy fomba hafa?
Valio i Jordi1323
Raisinao eo am-pandriana ny sary, ampifandraiso amin'ny iPad miaraka amin'ity fitaovana ity, ary avy eo afindranao ara-dalàna ireo sary. TSY ampiasaina hahitana amin'ny fotoana tena izy ny zavatra fakàn'ny fakantsary an-tsary. fiarahabana
Abdiel Flores (Panama) dia hoy izy:
Namonjy ahy ianao! Mandehandeha any India aho ary tsy afaka manao ny fanafarana amin'ny karatra SD. famerenana tsara, Misaotra.
Valiny tamin'i Abdiel Flores (Panama)
Appleed dia hoy izy:
Salama Nacho. Voalohany indrindra, miarahaba anao amin'ny tutorial anao. Misy ny kojakoja DE izay tsy mandeha toa ny tany am-boalohany (Mitranga amin'ny adaptatera AC ho an'ny UK) ary ny fijerena antsipiriany dia ankasitrahana.
Vao avy nanafatra iray tao amin'ny DE aho, ary tiako ho fantatra hoe iza amin'ny IOS no nanaovanao ilay fitsapana, satria novakiako tamin'ny pejy hafa fa misy fiasa izay notapahan'ny paoma hatramin'ny 4.2.2 ary tsy avelan'ny dikanteny manaraka ny hametaka ny flash drive. Marina izany?
Te hampiasa azy amin'ny iphone 4 5.0.1 JB aho, indrindra hidirana amin'ny multimedia avy amin'ny iFile.
Valiny ho an'i Amanzanados
Raha te hilaza aminao ny marina aho dia tsy tadidiko izay kinovan'ny iOS notsapaiko, avy be ny orana nanomboka tamin'izay nefa raha heverina fa ny iPad 2 io dia azo antoka fa iOS 4.3.3.
Tsy manana ilay adaptatera intsony aho satria zara raha nampiasa azy io ary nomeko an'ny mpiara-miasa iray izany fa heveriko fa tsy manana olana amin'ny fanaovana izay tianao ianao, eny, hisy eritreritra sasany tsy ho azonao ampiasaina noho ny ny fetran'ny amin'izao fotoana izao natolotry ny iPad napetrak'i Apple.
Alexander Pavon dia hoy izy:
Ny ipad-ko dia 3 ary tsy namolavola na inona na inona aho, nividy orsa aho taloha ary tsy mandeha amiko izany ,,, Fantatrao ve raha afaka manao zavatra momba izany aho?
Valiny tamin'i Alexander Pavon
Raha tao amin'ny iray amin'ireo magazay an-tserasera sinoa izany dia tsy maintsy soloinao izy io, nalaina an-tongotra indray mandeha aho, ary tsy nividy bebe kokoa. (Tsy misahirana milaza ny anarana hanaovana dokambarotra azy ireo akory aho)
Alfonso Ignacio dia hoy izy:
Ahoana no ahitako ny sary avy amin'ny kit sd ary tsy mila manafatra azy ireo? Raha manafatra ny sary avy amin'ny nikonako izay 32 mg tsirairay avy aho dia hiala daholo ny fahatsiarovako ny iPad-ko.
Misy programa manokana ahafahako mahita sary amin'ny efijery feno, nefa tsy mila manafatra azy ireo?
Tsy dia faly amin'ny tsiambaratelon'ny ipad aho.
Valiny tamin'i Alfonso ignacio
iMAME, ilay emulator MAME avy amin'ny App Store. Mampianatra anao hampiditra ROMS izahay